समाचार – Page 12 – List Khabar
Home / समाचार (page 12)
काठमाडौं । जनगणनाका दौरान तीन जना गणकको ज्या’न ग’ए’को छ । तथ्यांक विभागका अनुसार रसुवामा एक गणकले आ’त्म’ह’त्या ग’रे’का छन् । धादिङमा भने भीरबाट ल’डे’र एक जना गणकको मृत्यु भएको छ । कैलालीमा भने हर्ट अट्याक आएर एक जना सुपरीवेक्षकको मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ । जनगणनामा ४० हजार गणक …
काठमाडौं, ११ मंसिर : कास्कीको पोखरा महानगरपालिका गगनगौडाबाट एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मुस्ताङको लो–घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका-१ घर भई हाल पोखराको पृथ्वीचोक बस्दै आएका ४२ वर्षीय छिरिङ ढुन्डु गुरुङ रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, इलाका प्रहरी कार्यालय हंशपुर र वडा प्रहरी कार्यालय गगनगौडाबाट …
काठमाडौं । तपाईं भाग्यमाथि कत्ति विश्वास गर्नुहुन्छ ? तर भाग्यमानी र अभागी मानिसहरु यो दुनियाँमा छन् । यसरी फरक छुट्याइन्छपनि । यस्तै एक अभागी जोडिबारे आज हामी तपाईंलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ । २ हप्ता अघि गायक एमसी केभिनले प्रेमिका डियोलेन बेजेरासँग विवाह गरे जो पेसाले वकील हुन् । तर …
काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनको असर कपिलवस्तुको विद्यालयमा अध्यानरत विद्यार्थीहरुको पढाईमा परेको छ । चितवनमा जारी एमालेको दशौं महाधिवेशनका लागि शिक्षकहरु गएपछि कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक केही दिनदेखि भ्रमणमा गएको र अधिकांश शिक्षक एमालेको महाधिवेशनमा गएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको स्थानीयको भनाई छ …
एजेन्सी । हालसम्मकै नयाँ खतरनाक कोरोना भाइरसको भेरियन्ट भेटिएपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा संकटकाल घोषणा भएको छ ।न्युयोर्कका गभर्नर काथी होचुलले राज्यभर संकटकाल लागू गरिएको घोषणा गरेका हुन् । गर्भनर होचुलले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनेहरुको सङ्ख्या बढेकाले थप महामारी फैलिन नदिनका लागि संकटकाल लगाइएको हो ।’ …
भनिन्छ, एउटा तस्बिरले हजार शब्द`भन्दा बढी कथा भन्न सक्छ। यस्तै एक तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भा`इरल भइरहेको छ। तस्बिरसँगै यसको क्याप्सन`ले धेरैको ध्यान तानेको छ। पोस्ट गरिएको तस्बिरमा लेखिएको छ- एउटा स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई भ्रमणका लागि वृद्धा`श्रम लगेको थियो, जहाँ एउटी छात्राको आफ्नी हजुर`आमालाई भेटिन्। ती छात्राले आफ्ना बाआमासँग हजुरआमाको बारेमा …
काठमाडौँ – प्रहरीले रक्तचन्दनको ३३ लिटर तेलसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौंको तिलगंगाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । (तस्विर तल छ) पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं बानियाटार बस्ने सिन्धुली हरिहरपुर गाउँपालिका-४ घर भएका ५० वर्षीय हेम कुमार श्रेष्ठ, ललितपुर सानुगाउँ बस्ने मकवानपुर गढी गाउँपालिका-१ घर भएका …
जापानमा जागिर खोज्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अनौठो लाग्ने ७ कुरा , जानी राखे धेरै सजिलो हुने
अधिकांश विदेशीहरु जापानको रोजगारी भर्नासम्बन्धी प्रणाली देखेर आश्चर्यमा पर्छन् । डिस्को स्टडी नामक एक संस्थाले विदेशी विद्यार्थी जसले पढाई सकेर कम्पनीहरुमा जागरि खोजेका छन् उनीहरुविच गरेको सर्वेमा आधारित रही आजको लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । १. समय अधिकांश कम्पनीले विद्यार्थी विश्वविद्यालयको चौथो वा अन्तिम वर्षको …
वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्तव्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न । तर यसरि बिदेशिने युबा हुन या युवती आफ्नै नेपाली द’ला’लहरुबाट ठगिने र विभिन्न स’म’स्यामा पनि पर्ने गरेका छ्न, आजको बिषय …
एमसीसीबारे निर्णय छिटो लिन अमेरिकाले दियो दबाब, अब के हुन्छ ? काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय …